FAQs - Beijing Bendingathethanga Technology Co., Ltd
SPMK700 yepresha digital
SPMK223 xi Skena
pressure Comparator Impompo
Ubushushu Skena ...
SPMK 51X Series Process Skena
SDP Module Pressure Intelligent
iseti SPMK2000-1 of amaqhoshana 38 iiPC
Gas Connect SPMK2000-2 pipe
Apho ukuba Thenga
Yintoni isixhobo yamaqondo kwaye senza ntoni?
Isixhobo yongqanianiso yenye yeenkqubo esetyenziswa ukugcina isixhobo nokuchaneka. Umfumaniwesicelo inkqubo yokuqwalasela i njengesixhobo ukunika isiphumo isampuli ngaphakathi uluhlu eyamkelekileyo. Zokuphelisa okanye ukunciphisa izizathu ezibangela imilinganiselo ezingachanekanga ngumba ebalulekileyo yoyilo lezixhobo.
Umnqophiso wethu libonelela koxinzelelo umgangatho ophezulu kunye nobushushu Skena ku users.We na kumenzi lobungcali kwengcinezelo kunye nobushushu yongqanianiso isixhobo kunye iminyaka eli-17 yamava e-China.
Yintoni na imiqathango yokuhlawula?
Samkela intlawulo ye-100% TT kwangaphambili.
Yintoni na akhawunti yebhanki yakho yebanki?
Beneficiary Igama: Beijing Bendingathethanga Technology Co., Ltd
Bank Beneficiary esithi: Industrial and Commercial Bank of China Beijing Qinghe Town Sub-isebe
USWIFT IKHOWUDI: ICBKCNBJBJM
Ingaba umenzi yamaqondo instument okanye inkampani zokurhweba?
Beijing Wathetha Technology Co., Ltd umenzi professional zezixhobo uxinzelelo kunye nobushushu umlinganiselo kwimibhobho e China.We kusekelwe ngo-1998 nge-capital registerd million 33,8 Yuan.
Ngaba uza kubonelela naziphi iziqinisekiso zezixhobo zokwenza umlinganiselo kwimibhobho kunye ngezixhobo?
Ngokwesiqhelo akukho isiqinisekiso Ukulinganiswa ngokunikezela.
Ukuba ufuna iziqinisekiso zezixhobo zokwenza umlinganiselo kwimibhobho ukusuka 3rd njengoko Beijing Umlinganiselo sandi Institute, apho kuya kubakho extra cost of USD130.0.
Kuba SPMK700 yepresha yedijithali, ngaba ukunikeza 0.05% Fact accuracy ngenxa ngaphezu 1000bar?
Kuba uluhlu xi 1000bar okanye ngaphezulu, singakwazi ukubonelela 0.1% ichanile max.
Ukuba ufuna 0.05% Fact okanye nokuchaneka ephakamileyo 1000bar nangaphezulu, ixabiso iya kuba ngaphezu kwe USD6500.0.Because kuyabiza kakhulu, nto leyo yahluke ngokupheleleyo njengoko eziphathekayo usebenzisa izinto womenzi woluvo loxinzelelo. Akukho nomthengisi ukunika 0.05% Fact kwi 1000bar okanye ngaphezulu ngexabiso eliphantsi ezinjalo.
Kuba inkoliso xi uluhlu ngaphantsi kwe 1000bar, singakwazi ukubonelela 0,025% Fact, 0.05% FS nayo. Nceda unike uxinzelelo uluhlu nokuchaneka kufuneka, ke ndicaphula na intengo ngoko.